सर्पलाई पूजा गर्छिन् यी चर्चित बलिउड अभिनेत्री, घरमै पालेकी छिन् खतरनाक सर्प ! « Onlinetvnepal.com
सर्पलाई पूजा गर्छिन् यी चर्चित बलिउड अभिनेत्री, घरमै पालेकी छिन् खतरनाक सर्प !
Published : 14 March, 2019 9:34 pm
सर्प भनेपछि हामी निकै डराउँछौं । यो अत्यन्तै विषालु जीवले डसेमा मृत्यु हुने भयले हामी त्रसित हुन्छौं । तर, केही मानिसहरु भने सर्पसँग डराउँदैनन् । बरु सर्पलाई निकै प्रेम गर्छन् । आज २० नोभेम्बरमा जन्मदिन मनाइरहेकी बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री सुस्मिता सेन पनि सर्पलाई पूजा गर्छिन् । यतिमात्र होइन सुस्मिताले आफ्नो घरमै सर्प पालेर राखेकी छिन् ।
१९९४ मा ब्रह्माण्ड सुन्दरीको उपाधि जित्ने सुस्मिताले १९९६ मा फिल्म दस्तकबाट बलिउड डेब्यू गरेकी थिइन् । १९७५ मा बंगाली परिवारमा जन्मिएकी सुस्मिताका पिता इण्डियन एयरफोर्सका विंग कमाण्डर थिए । उनकी आमा ज्वेलरी डिजाइनर थिइन् र दुबइमा उनीहरुको गहनाको पसल थियो । सुस्मितालाई सानैदेखि नै घस्रिने जीवप्रति प्रेम थियो । यही कारण सुस्मिताले घरमै एक पाइथन सर्प पाल्न थालिन् ।
पाइथन जस्तो खतरनाक सर्पलाई नियन्त्रणमा राख्नु निकै गाह्रो कुरा हो । यसबाट थाहा हुन्छ कि सुस्मिता सुन्दर मात्र होइन बहादुर पनि छिन् ।
आकारमा पाइथन निकै ठूलो हुन्छ । २ मिटरभदा लामो हुने यो सर्प २० किलोजतिको हुन्छ । ५ सेप्टेबर २००६ मा छापिएको हिदुस्तान टाइम्सको एक रिपोर्टअनुसार सुस्मिता कुनै फिल्मको सुटिङमा थिइन् । त्यही बेला फिल्मको सेटमा एक सर्प आयो । सुस्मिता सर्पसँग डराइनन् बरु सर्पको अगाडि गएर बसिन् र कुनै हिन्दू मन्त्रको जप गर्न थालिन् ।